Waa maxay walax lagu kaydin karaa kaadhka xusuusta mobile?
Kaararka xusuusta Mobile hubiyo in user helo awoodda ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo waa weyn oo ma aha oo kaliya in size kaydinta laakiin sidoo kale yar ee lagu kaydiyo si ay u hubiyaan in meel bannaan oo marna degan sameeyo. Marka ay timaado in su'aasha sakhiray markaas waxaa muhiim ah in la ogaado in uu yahay xadka lahayn ee nooca xogta ah in la kaydin karo kaadhka xusuusta mobile sida ay u hubiyaa in lagu keydiyo loo isticmaalo in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican u users ah. Sidaas oo ka sawiro duubista iyo fariimaha qoraalka ah si ay u soo xiriir wixii faahfaahin ah Kaarka xasuusta mobile loo hubiyo in dhammaan noocyada kala duwan ee xogta iyo noocyada ay ku kaydsan yihiin oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi kara. Si kastaba ha ahaatee user waa in ay hubiyaan in kaadhka xusuusta qalab ee la doorto sida dhadhanka oo ay u la soo saaro sameeyo oo ay u sabab tahay xaqiiqda ah in user uu noqon doono oo kaliya inay awoodaan inay isticmaalaan kaadhka xusuusta ilaa awood gaar ah u qalabka mobile iyo sare kaararka xusuusta kaydinta looma isticmaali karo gudahood qalabka oo aan la tala galay la mid ah. Buugga Sidaa darteed waa in loo akhriyo si aad u hesho natiijooyinka baahan yahay iyo in la hubiyo in qalabka waxaa sidoo kale wada cafiyo arrintan la xiriira.
Sababaha ka luma files ka kaadhka xusuusta mobile
Waxaa jira sababo badan oo ay sabab u tahay taas oo files ka lumaan gal kaadhka xusuusta iyo haddii user ee ma aha casriga ah ugu xeel dheer ka dibna xogta ka dhammaatay weligeedba way ka maqan. Si looga fogaado xaaladda noocan oo kale ah waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in sababaha khasaaro xogta lagu yaqaan. Ka dib waxaa liiska iyo sharaxaad gaaban oo ah sababaha keeni luma in macluumaadka lagu kaydiyo laguna gal kaadhka xusuusta:
1. maaraysay ahayni
Waa mid ka mid ah sababaha ugu badan oo keeni in ay arrinta soo gaartay xog ku saabsan kaararka. Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user had iyo jeer ka qabtaa kaadhka xusuusta daryeelka iyo buuga la xidhiidha in la yimaado waa in la akhriyo waa in si xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin by user ee arrintan la xiriira.
2. formatting aan si buuxda u samaysay
Formatting kaararka xusuusta cusub si loo hubiyo in ay isticmaali gudahood qalabka waa talaabada ugu horrayn waxa weeyi in waa in la qaato arrintan la xiriira iyo haddii user ayaa waxan sameeyey markaas waa heer sare ah ayaa lagu talinayaa. Formatting waa in dhammaantiis la sameeyo oo user waa in la hubiyo in bar formatting la soo gabagabeeyo sameeyo. Haddii aan si markaas sameeyo kaarka hubaal siin lahaa arrimaha ku orod dheer.
3. Marka ay kulaylka iyo biyaha
Waxaa mar kale waa qalad aadanaha taas oo horseedaysa in ay soo gudbiyaan khasaaraha iyo musuqmaasuqa xogta. User waa in la hubiyo in meel engegan yahay meesha kaarka la mar walba lagu hayaa ama ku kaydsan si loo hubiyo in arrimaha ku saabsan iftiinka iyo kulayl yihiin waligeed ka horimaanin iyo user wuxuu sidoo kale uu helo xogta ka kaararka xusuusta jir haddii u baahan yahay.
Sidee soo kabsado files tirtiray ka kaadhka xusuusta phone Android?
Si aad u hesho users ka soo arrinta Wondershare mar kale yimaado oo la gobol ka mid ah farshaxanka iyo barnaamij si fiican oo magdhow in la hubiyo in xogta la xaqiijistay oo ka soo dhacsaday ay dhacdo in wixii khasaare ah ka dhigi lahaa. Wondershare Dr. Fone u Android waa ugu fiican iyo qalab ugu horumarsan dunida taas oo ka dhigaysa hubiyo in wixii kaloo la sameeyo ka kaaftoomi badan oo aan sida barnaamijka uu yahay mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo ay hayaan. Waa sifooyinka barnaamijka kaas oo doorasho sare ee isticmaala qaato iyo ratings ayaa sidoo kale waxaa laga arki karaa website-ka rasmiga ah ee Wondershare ah. Waxaa jiro liis aad u dheer oo ka mid ah telefoonada iyo noocyada la xiriira in sidoo kale waxaa laga daawan karaa link http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-reference.html oo halkan user sidoo kale awoodo baadhaan qalabka. Marka la soo koobo Dr. Wondershare ka Fone u Android waa ugu fiican iyo barnaamijka oo kaliya kaas oo u ogolaanaya user inuu ka soo kabsado tiro balaadhan oo ah qaabab aan wax arrintan iyo dhib.
Habka inuu ka soo kabsado xogta la isticmaalayo Wondershare Dr. Fone u Android ayaa lagu sharaxayaa sida hoos oo ay tahay in la xuso in sawirada ay yihiin oo kaliya u qaatay sida tusaale si hannaanka si fudud loo sharxi karaa:
1. Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-guide.html user waa in la hubiyo in faylasha barnaamijka waxaa lagala soo bixi oo lagu rakibay sameeyo. Marka samaysay barnaamijka waa in la bilaabay. Marka la sameeyo telefoonka waa in lagugu xiro computer si ay barnaamijka waxaa lagu ogaadaa,
2. qalabka android jidka in la raaco waa Settings "> guji" Codsiyada "> guji" Development "> hubiyo" debugging USB "in la sii wado,
3. Barnaamijku wuxuu markaas u falanqeeyaan doono qalabka:
4. nooca file iyo habka scan markaas waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in barnaamijka soo baxa in ay ka shaqeeyaan,
5. hab iskaanka waa ka dibna in la soo xulay:
6. Marka button xiga waxa ay riixi scan sida ay hab ee la doortay ayaa ku bilaaban doona, waana hubaa in files waxaa soo kabsaday ka dhigi doonaa. User ayaa markaas u baahan yahay in ay doortaan file ah in ay tahay in la soo kabsaday ka dibna ay isticmaalaan kabsado button inay sameeyaan wixii kaloo ah oo la joojiyo nidaamka:
Sidee soo ceshano files tirtiray oo dhan kaararka xusuusta mobile?
Iyadoo xarrago leh iyo state of interface tahay Wondershare Data Recovery waa khaaliska barnaamijka ugu fiican oo loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo wax waqti ah gudahood oo dhan marka ay timaaddo soo kabashada xogta. Waa barnaamij gaar ah oo uu soo horumariyo by Wondershare si loo hubiyo in dadka isticmaala ee dhamaan fasalada oo dhan faa'iido badnaan hawshii qaadan kartaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ma aha oo kaliya ka Helayn fududahay in la isticmaalo barnaamijka ay sabab u tahay is-dhexgal qaabka laakiin waxaa barnaamijka sidoo kale waa mid aad wax ku ool ah oo uu sameeyo baahan yahay iyada oo aan kala go 'kasta. Ma jiraan wax cayayaan ama ceebaha gudahood barnaamijka sida Wondershare kooxda horumarinta waa wax ku ool ah in lagu casriyeeyo barnaamijka. Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa OS oo dhan sidaas darteed waxaa kale oo ay xaqiijinayaan in soo kabashada madal karoos ka dibna kala iibsiga la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Si aad u heshid waxa ugu fiican waxaa lagula talinayaa in ay maraan habka hoos ku qoran si aad u hesho natiijooyinka:
1. link in ay tahay in la raaco waa http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html si barnaamijka la soo bixi oo bilaabay
2. nooca file waa waxa ay tahay in la soo xulay ee heerka ku xiga ama interface ka muuqata:
3. Meesha ka halkaas oo wax kaqabashada waxa looga baahan yahay waa ka dibna in la cayimay mid kastaba:
4. Marka files soo kabsaday ayaa la soo bandhigay sawirka kadib kuwa la doonayo ay tahay in la soo xulay si ay u hubiyaan in badhanka soo kabsado la isku soo riixayo in markaas dib u soo ceshano iyo dhameysan nidaamka:
Kaararka xusuusta Best qalabka mobile
Waxaa jira tobanaan kun oo shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah in sameeyo kaararka qalab mobile si aad u hesho saldhig user soo jiidatay. Ka dib markii qaar ka mid ah noocyada ugu fiican in loo tixgeliyo halka samaynta iibsi ee arrintan la xiriira:
> Resource > Memory Card > Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka kaadhka xusuusta ee mobile